Dzivirirook Apple Watch Strap Inotakura Nyaya | Ndinobva mac
Dzivirirook Apple Tambo Yakatakura Yakatakura Nyaya
Chimwe chezvinhu zvinoitika kune avo vedu vari "mageeks" e chinja mabhanhire eApple Watch yedu nguva dzose ndeyekuti kana isu tichiendawo kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe isu tinofanirwa kuisa tambo dzese kana dziya dzatinoda kutora parwendo mune imwe kona yehombodo, sutukesi kana zvimwe zvakafanana.
Mune ino kesi siginecha inozivikanwa Lululook inotipa yakachipa uye yepamusoro sarudzo yekutakura kana kuchengeta inosvika kumatanhatu matambo Muchiitiko icho zvine musoro hachina kugadzirwa nedehwe asi icho chinonyatso zadzisa mashandiro acho.
Unogona kutenga ino yeululoululo tambo yekuchengetedza kesi pano
Wedzera zipi ine ngoro mbiri kuti ugone kuzarurira zvizere nekutsvaga tambo yatinoda mune yechipiri, zvakare wedzera chikamu kunze uko kwatinogona kuchengeta gwaro kana zvakafanana. Mukati mechinhu chakachengetedzwa chaizvo uye tichaona kuti tinogona kuchengeta zvimwe zvinhu nekuda kweiyo zvikamu zviviri zvaanowedzera pamusoro mukati.
Iyo Apple Watch yega yekuchaja tambo, mamwe maAirPods Pro, mahedhifoni ako, chishongedzo chekugadzirisa tambo kana chero chinongedzo chine chekuita neApple wachi. Ichokwadi ndechekuti chifukidziro ichi chinogona kubatsira kunyangwe kuchengeta wachi yacho pachayo, kunyangwe isina kukurudzirwa nekuti haina kuwedzera chero kuvharwa kwemukati kana zvakafanana uye inogona kurova zvemukati kana ikabuda muhomwe pachayo.
1 Zviyero chikamu chakakosha cheiyi kesi
2 Mutengo wenyaya iyi yeululoululo
Zviyero chikamu chakakosha cheiyi kesi
Uye ndezvekuti kunyangwe isina kunyanya kukura mumatanho akazara, zvakakosha kuti tambo dzakachengetedzwa mukati. Neichi chikonzero, mune ino kesi, vaparadzanisi vane nzvimbo yemhando dzese dzemabhande uye kana uine akati wandei iwe unogona kutowedzera kusarudzwa kwadzo, uchivaisa nezvinhu. Iyo yesilicone, yeganda uye zvichingodaro, izvo chete zvandaisazobatanidza pamwe ndidzo dzesimbi nekuti pasina nzvimbo pakati pavo dzaigona kukuvara.
Mune ino kesi nyaya ine zviyero zve 22 x 17 x 5 cm uye zvine huremu hwehuremu hwe 372g. Izvi zvinogona kutakurwa zvakachengeteka musutukesi kana mubhegi, sekunge yaive bhegi rekugezesa. Izvo chaizvo zvinoshanda kunyangwe kuchengetedza tambo pamba, saka hazvisanganisane uye unogona kugara uchitsvaga yaunoda kuisa pawachi yako.
Mutengo wenyaya iyi yeululoululo
Pasina kupokana ndeimwe yeakanaka kunaka kweiyi firm, mitengo yayo. Zvine musoro kuti isu hatisi kutaura nezvechigadzirwa cheganda (kunyangwe ichichienzanisa chaizvo) uye premium inopedza, asi kunyatso chengetedza mabhanhire edu anopfuura zvakakwana.
Mutengo wako izvozvi mukati Lululook's webhusaiti ndeye $ 34,99 uye ine 30% kuderedzwa pamusoro pemutengo wayo wenguva dzose. Chishongedzo icho pasina mubvunzo chinogona kuva chekushandisa kukuru kune vazhinji vevashandisi vanochengeta tambo dzinoverengeka uye mamwe acho ari emhando yepamusoro kana kunyangwe kufamba netambo dzakachengetedzwa zvakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dzivirirook Apple Tambo Yakatakura Yakatakura Nyaya
HomePod inotengeswa kunze muUnited States
Photoshop ikozvino inotsigira Apple's M1 processor